Kooxda bayern munich oo wadahadal kula jirta Dayot Upamecano.
Home Horyaalka Germalka Kooxda bayern munich oo wadahadal kula jirta Dayot Upamecano.
Kooxda bayern munich ayaa wada baadi goob xoogan oo ah daafaca faransiiska ah ee upamecano waxaana ay damacsan yihiin in dagaal adag ay la geli doonaan kooxo waaweyn oo dhankooda aad u xiiseynayaan da’yarkaan
Agaasimaha mustaqbalka dhow olivier kahn waxa uu yiri Waxay noqon doontaa wax laga xumaado in Bayern Munich aysan xiiseyneynin daafaca RB Leipzig Dayot Upamecano.
Maamulaha guud Karl-Heinz Rummenigge ayaa horey u muujiyay in kooxdu ay rabto inay la soo saxiixato da’yarka Faransiiska ah, halka Leipzig ay xaqiijisay inuu haysto qandaraas dhan 42.5 milyan euro (£ 38m / $ 52m).
Kahn, oo noqon doona madaxweynaha kooxda Bayern 2022, ayaa laba jibaaray ku adkaysiga kooxda ee ah inay wadahadal la gasho daafaca dhexe, maadaama ay u baahan yihiin Saxiixiisa inay waqtigaan.
Previous articleLiverpool oo ogolaatay heshiis 2 milyan oo ginni ah oo kusoo qaadanayaan Ben Davies.
Next articleNeymar oo xaqiijiyey inuu sii joogi doono PSG.